Maalinta: Febraayo 21, 2019
Calaamadaha Gaadiidka iyo Macluumaadka ee Xirfada Heerka
147 Number Heerka Isugeynta Gaadiidka iyo Calaamadaha Macluumaadka Khadka Sivas-Samsun Iyadoo ay sabab u tahay hindisada, Maamulka Waddada Tareenka Gobolka 4 2018 Agaasime Goboleed (TCDD) wuxuu leeyahay qiime ku dhow 600249 / 2.412.159,89 [More ...]
Cusboonaysiinta Turan Güneş Street
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay hawlo dayactir ka fulisay wadooyinka iyo wadooyinka meelo badan oo magaalada kamid ah. Dayactirka wadooyinka iyo jidadka wajiga cusub ee Kocaeli, ee Wasaaradda Gaadiidka Turan Güneş Street Izmit degmada shaqo [More ...]
Wadada Istiklal, gaari xamuul ah oo ka tagaya safarka 07.00 ee aroortii ayaa lala shiray gaari xamuul ah. Dhacdadu waxay ka dhacday Wadada Istiklal ee 07.00 subaxdii. [More ...]
TCDD waxay sameyn doontaa shaqaaleynta shaqaalaha 356 Shaqaalaha iyada oo aan la helin Axdiyada KPSS! : Madaxtooyada Maamulka 28 Sida ku xusan ogeysiiska soo iibsiga shaqaalaha oo la soo saaray bishii Diseembar 2018, shaqaalaha gudaha TCDD (Tareenka Gobolka) [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, Gebze-Halkalı Dhameystirka howlaha dhismaha iyo calaamadaynta shaqooyinka rakibida wadada oo dhan ee khadka Marmaray, wuxuu yiri, "Waxaan diyaarin doonnaa (Line) oo diyaar u ah furitaanka usbuuca koowaad ee Maarso." Wasiirka [More ...]
Dhismaha Wadooyin Cusub oo 5 ah oo loo maro Tatvan Pier. 5 / 2019 GCC qiimaha xadka 25470 TL iyo qiyaasta qiyaasta Agaasinka Iibsiga Gobollada (TCDD) 3.399.504,17 [More ...]
Gaadiidka ka yimid Memur-Sen oo u diraya Maareeyaha Guud ee TCDD
Kenan Çalışkan, Gudoomiyaha Gaadiidka Memur-Sen, iyo Kuxigeenada ayaa booqday Ali İhsan Uygun oo loo magacaabay Maareeyaha Guud ee TCDD. Kenan Çalışkan, Maareeyaha Guud ee Gaadiidka-Sen [More ...]
Qodobbada Muhiimka ah ee Ski Sport
Borotokool ayaa la saxeexay inta udhaxeysa degmada Ordu iyo dawlada hoose ee adeega dhalinyarada iyo isboortiga iyada oo lafiirinayo “Mashruuca Isboortiga ee Ski Distooriga hazırlanan oo loo diyaariyey horumarinta isboortiga barafka ee gobolkeena. Madaxweyne Engin Tekintaş, iş Shaqadeenna [More ...]
First of Mashruuca Guud ee Baaskiilka ee Afyonkarahisar
Gawaarida Afyonkarahisar'ın iyo mashaariicda dadka lugeynaya ayaa sii wada nasasho. Dhismaha jid-gooyooyinka ugu horreeya ee dadka lugeynaya, oo ka mid ah mashruucyada murashaxa Duqa Magaalada AK Mehmet Zeybek, ayaa la bilaabay. Oo Mehmet Zeybek [More ...]
10 Thousand Calaamadaha Tilmaamaha Cusboonaysiiyey ee ku yaalla Adana
15 ee Adana ayaa dhammaystirtay rakibidda calaamadaha jihada iyada oo la raacayo heerarka caalamiga ah ee xarunta dejinta 828 ee degmada. Dawlada Hoose ee Magaaladda Adna, si loo hubiyo nabadgalyo xumo iyo kala go 'aan degganeyn socodka 15 degmo ee 828 calaamadaha xarunta tilmaamaha [More ...]
Malatya-Çetinkaya Highway over over on Naafada Dhismaha Naafada Naafada Sida Result of Tender Republic of Turkey State Railways TCDD 5 Agaasinka Iibsiga Gobolka (TCDD) 2018 / 691247 GCC qiyaasta qiimaha 536.929,36 TL Malatya-Çetinkaya [More ...]
Gebze's 7 Multi-Storey Car Park ayaa si degdeg ah u socota
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay bilowday inay dhisto xero gawaarida 7 dabaqa ah ee suuqa Gebze. Kooxuhu waxay daadiyaan shubka sagxadda salka ah ee loo yaqaan '1's iyo 2' sagxadda hoose waxayna bilaabeen dejinta la taaban karo ee saldhiga 3. Bisha Cas ee Gebze [More ...]
RayHaber 21.02.2019 Warbixinta Shirka
Wadooyinka New 5 ee Tatvan Pier